ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်း(လျာထားချက်) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီမှ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စိစစ်တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်အကြံပြုချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာ – Yangon Hluttaw
Home / အစီရင်ခံစာများ / ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်း(လျာထားချက်) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီမှ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စိစစ်တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်အကြံပြုချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာ
Ygn Editor June 12, 2019	အစီရင်ခံစာများ 60 Comments 767 Views
Previous ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်း(လျာထားချက်) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီမှ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စိစစ်တွေ့ရှိချက်၊ သုံးသပ်အကြံပြုချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက် အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်သို့ဖတ်ကြားတင်ပြခြင်း
Ihave found very interesting your article.It’s
pretty worth ennough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you
What i do not realize is in fact how you’re no longer really much more smartly-preferred than you might be right now.
I was reading some of your content on this website and I think this web site is rattling informative! Keep on putting up.
Thank you for any other wonderful article. Where else may anybody get that kind of info in such an ideal means of writing? I haveapresentation next week, and I’m on the search for such information.
can you get cheap prednisolone in Canada
can i buy generic cialis prices in the USA